Laptop Battery အဆင်မပြေလို့ပါ။ — MYSTERY ZILLION
Laptop Battery အဆင်မပြေလို့ပါ။
ကျွန်တော် laptop က Battery နည်းလာရင် USB Mouse က လွတ်လွတ်သွားတယ် Mouse မကောင်းလို့လား ဒါမှမဟုတ် တခြား setting တွေကြောင့်လား ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ ပြီးတော့ Plug ထိုးပြီး အားသွင်းထားရဲ့နဲ့ Battery ကကုန်ကုန်လာတယ်။ နောက်ပြီး Plug ထိုးထားရင် touch pad က သုံးမရဘူး။ ဘာကြောင့်ပါလည်းခင်ဗျာ။ ကူညီကြပါအုံး။
What's your laptop brand? And what OS are you using now?
I have been using hp 520 laptop and window7service pack 1.